Fortnite မှ Samsung Galaxy အတွက်သီးသန့်ထုတ်ကုန်သစ်တစ်ခုထုတ်မည် | Androidsis
သီးသန့်အသစ်ဖြစ်သော Fortnite pack သည် Samsung Galaxy သို့ရောက်လာသည်
Nerea Pereira | | Android ဂိမ်းများ
အဲဒါဖြန့်ချိကတည်းက Samsung ၏ Galaxy Note ကို 9, အလွန်အထူးသဖြင့်ဝိသေသရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ကန့်သတ်အချိန်များအတွက်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် Fortnite ၎င်းသည်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူ Note မိသားစု၏ထင်ရှားကျော်ကြားမှုအသစ်အတွက်သီးသန့်ရရှိခဲ့သည်။ ပြန်လည်ရရှိသောကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များအရကိုရီးယားကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပိုမိုပါ ၀ င်မည့်အထုပ်အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်ဤစီမံကိန်းနှင့်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဘယ်အချိန်မှာငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုငါသိ၏ Fornite အရောင်းရဆုံးဖြစ်သောဂိမ်းကစားသူအားလုံးအကြားအလွန်ထိရောက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Samsung Galaxy Note9သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသီးသန့်ဖြစ်မှုကြောင့်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဤစီမံကိန်းကိုစိတ် ၀ င်စားရန်နှင့်အတွေးအမြင်အသစ်များကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
သင်၏ Samsung Galaxy အတွက်သီးသန့် Fornite ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ထို့အပြင်ယနေ့ Samsung ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် Korean ကုမ္ပဏီသည် Fortnite ကစားသမားများကိုနှစ်သက်မည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသတင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်။ အသစ်အရေခွံများ, ကစားရန်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်များစွာသောအခြားရွေးချယ်စရာ။ ၎င်း၏လွှတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ? နိုဝင်ဘာလ 1 ရက်နေ့အထိ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာကိုရီးယားကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ပစ္စည်းတွေရနိုင်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ အခုချိန်မှာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကရရှိနိုင်တဲ့စမတ်ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Samung Galaxy Note9နဲ့ Samsung Galaxy Tab S4 တို့ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ကျန်တဲ့ Samsung ထုတ်ကုန်တွေအကြောင်းသတင်းမရသေးပေမဲ့လည်း Samsung Galaxy S9 မှာဒီ packet တွေရှိမယ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။ fortnite အရေခွံ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့ဤအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်မည့်အချက်သုံးချက်ကိုသာသိပြီး၎င်းတို့မှာ -aကျောပိုးအိတ်အသစ်ဂိမ်းရဲ့အစမှာဘတ်စ်ကားကနေပြုတ်ကျသွားတဲ့အက္ခရာရဲ့အသားအရေအသစ်ကိုပြန်လည်ထိတွေ့ပေးမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အသစ်စက်စက်အထပ်ထပ်ရလိမ့်မယ်။ ဒီဇိုင်း, ဒါပေမယ့်ငါတို့ကအရမ်းမူရင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသေချာကြသည်!
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသင်းကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရမည့်နေ့ရက်အထိသာစောင့်ဆိုင်းနိုင်သည် Ninja galaxy အဖွဲ့ လာမည့်ဂိမ်းယှဉ်ပြိုင်မှု၌ဤအသစ် fortnite pack ကိုအဓိက။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » သီးသန့်အသစ်ဖြစ်သော Fortnite pack သည် Samsung Galaxy သို့ရောက်လာသည်
Chromecast အတွက်သဟဇာတဖြစ်သော TV ကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုရန်ထိပ်တန်းအပလီကေးရှင်းများ